Wednesday August 12, 2020 - 13:10:35 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada Jilib ee Wilaayada Islaamiga Jubbooyinka ayaa shahaadooyin lagu gadoonsiiyay arday aad u da'a yar oo isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaasi oo dhameystay barashada Quraanka Kariimka.
Mu’assasada Al-utrurjah oo ah Mu’assaso waxbarasho ayaa qabatay munaasabadda lagu soo bandhigyay shahaadane lagu gadoonsiinayay arday da dhameysatay barashada Quraanka Kariimka, Ardaydaas ayaa ka mid ahaa arday-da wax ku barata xarunta Mu’assasada Al-utrujah xarunteeda magaalada Jilib.
Munaasabadda waxaa kasoo qeyb galay Culimo, Waalidiin iyo marti sharaf kale waxeyna ardayda qalin jabisay goobta xafladda kusoo bandhigeen bandhig cilmiyeed aad u qurux badan.
Halkan Hoose Ka Daawo Sawirrada Xafladda.
Sawirro: Xoolaha Zakada sanadda 1442 oo laga qeybiyay degmada Saakoow ee Jubbada dhexe.
Sawirro: sida degmada Jilib looga qeybiyay Zakada xoolaha sanadda 1442.
Sawirro: Dibad baxyo lagu difaacayay Nabiga SCW oo ka dhacay degmo katirsan gobolka Gedo.